सगरमाथाको नयाँ उचाइ कहिले ? - Lokpath Lokpath
२०७७, १७ जेष्ठ शनिबार ०८:४७
प्रकाशित मिति : २०७७, १७ जेष्ठ शनिबार ०८:४७
काठमाडौं । नेपालले सगरमाथाको मापन अन्तिम चरणमा पु-याइरहेको बेला चिनियाँ सर्भे टोलीले सगरमाथा शिखरमै पुगेर मापन कार्य पूरा गरेको छ । ६५ वर्षअघि सन् १९५५ मा मापन भएको सगरमाथाको उचाइ हालसम्म ८ हजार ८ सय ४८ मिटर अर्थात् २९ हजार २८ फिट मानिँदै आइएको छ । सगरमाथाको नयाँ मापनले अब नयाँ उचाइ कति छ भन्ने विषयमा यथार्थ विवरण आउनेछ ।
के छ भारतले नेपाललाई पठाएको कूटनीतिक नोटमा ?
नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर पटक पटक वार्ताका लागि आग्रह गरेपनि चासो व्यक्त नगरेको
कक्षा ११ को नतिजा नआउँदै भर्ना प्रक्रिया सुरु गरियो
माध्यामकि शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा सार्वजनिक नहुँदै उपत्यकाका अधिकांश निजी विद्यालयले कक्षा ११